Xiaomi dia efa any amin'ny tsena ivelany 82 | Androidsis
Tamin'ny fanontana voalohany an'ny Chinese International Import Expo, natao tao Shanghai, Lei Jun, mpanorina ny Xiaomi, nanambara vaovao vitsivitsy mifandraika amin'ny fikasan'ny orinasa handeha manerantany mandritra ny forum fifanakalozana sy fampanjariam-bola.
Tamin'io hetsika io dia nambarany izany Xiaomi dia misy ankehitriny amin'ny tsena 82 any ivelany, izay tsy zava-bita kely, raha jerena ny nanombohan'ny orinasa ny drafitra fanatrehany manerantany tamin'ny 2014, efa-taona taorian'ny nananganana an'i Xiaomi tany Shina.
Hatramin'ny telovolana faharoa amin'ny taona 2018, Ny orinasan-tserasera iraisam-pirenena an'i Xiaomi dia nitombo 150 isan-jato ary niditra am-pahombiazana tamin'ny tsena vahiny 82. Anisan'ireo tsena 82 misy ny orinasa dia ao anatin'ny dimy voalohany ny marika eo amin'ny tsena 25 eo ho eo.
Nanampy izany i Lei Jun Tanjon'i Xiaomi ny manolotra vokatra avo lenta ho an'ireo mpanjifa eo an-toerana misy vidiny lafo. Ny orinasa koa dia manambola hampiofana ekipa eo an-toerana sy hamokatra vokatra eo an-toerana. Ohatra, 95% ny vokatra Xiaomi any Indonezia no amboarina eo an-toerana. Any India, ny orinasa dia efa nanangana orinasam-pamokarana eo an-toerana ary nanomboka nanambola ihany koa tamin'ny fanombohana mba hampivelatra ny indostrian'ny Internet amin'ny finday.
Una vez más, Xiaomi dia nandresy an'i Samsung mpifaninana ho marika finday avo lenta misy entana betsaka indrindra amin'ny tsena indiana amin'ny telovolana fahatelo amin'ity taona ity, araka ny tatitra Counterpoint Research. Ny anjaran'ny tsenan'ny Xiaomi mandritra ny telovolana fahatelo amin'ny taona 2018 dia 27%, raha Samsung kosa nahazo 23% ny tsena.
Tany Indonezia, Xiaomi no lasa marika faharoa lehibe indrindra ary mitarika ny fizarana ho an'ny telefaona latsaky ny $ 150. Any dia manana fizarana 22% izy, raha ny marika voalohany, Samsung, dia manana 25% ny tsena.
Mitohy manitatra manerantany ny orinasa, ary miaraka amin'ny tombony azo amin'ny fizarana tsena amin'ny firenena maro. Ny isa fandefasan'i Xiaomi manerantany dia mitombo ihany koa. Voalaza fa nandefa 9.7% an'ny finday avo lenta rehetra ny orinasa tamin'ny telovolana fahatelo tamin'ity taona ity. Manerantany, i Xiaomi dia mitana ny laharana fahefatra amin'ny fandefasana finday avo lenta miaraka amin'ireo singa maherin'ny 34.3 tapitrisa amin'ny telovolana fahatelo amin'ny taona 2018, ao ambadiky ny Samsung, Huawei ary Apple ihany.
Ankoatra an'i India sy Indonezia, ny orinasa koa dia mandroso amin'ny tsena eropeana, toa an'i Espana, izay mitohy misy fiatraikany tsara. Xiaomi dia efa hiditra any UK amin'ny faran'ity herinandro ity ary mikasa ny hisokatra ny fivarotany any Londres ny 10 Novambra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Xiaomi dia eo amin'ny tsena ivelany 82